Ali Yun ဟာ သုံးစွဲသူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲ သတင်းပေါက်ကြားမှု တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ပြောကြား - Pandaily
(Source: Data Center Dynamics)
Ali Yun ဟာ သုံးစွဲသူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲ သတင်းပေါက်ကြားမှု တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ပြောကြား
Aug 23, 2021, 21:54ညနေ 2021/08/24 06:06:12 Pandaily
လတ်တလောတွင် ရှင်းကျန်းပြည်နယ် ဆက်သွယ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့သို့ ဇူလိုင် ၅ ရက်က တိုင်ကြားစာတစ်စောင်၊ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် Ali Cloud ကုမ္ပဏီက သုံးစွဲသူများ၏ သဘောဆန္ဒမပါဘဲ တွက်ချက်ဖော်ပြသည့် မှတ်ပုံတင်အချက်အလက် များကို သုံးစွဲသူများထံတွင် ရယူထားမည်ဟု ကြားခံအဖွဲ့က ဖော် ပြထားသည်။
သြဂုတ် ၂၃ ရက်က ရှင်းကျန်းပြည်နယ် ဆက်သွယ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး တစ်ဦးက ၂၁ ရာစု စီးပွားရေးအစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်၍ အထက်ပါမေးခွန်းကို ဖြေကြားရာတွင် ယင်းစာသည် ဟုတ်မှန်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Ali Cloud က ဌာနတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် တိုင်ကြားမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မတိုင်မီ နှစ်ဆတိုးလာမည်ဟု ဆိုသည်။ Ali Cloud Phone မားကကျတငျးဝနျထမျးတဈဦးဟာ ကုမ်ပဏီစညျးကမျးခြိုးဖောကျမှု၊ ခှငျ့ပွုခကျြမရှိဘဲ ဖောကျသညျရယူမှုနဲ့ ရောငျးဝယျရေးဝနျထမျးတှကေို ဆကျသှယျပွီး ဖောကျသညျတှကေို တိုငျကွားနိုငျတယျလို့ ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Ali Yun က “မည်သည့် ဝန်ထမ်းကိုမျှ တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ထားခြင်းမရှိဘဲ သုံးစွဲသူများ၏ မှတ်ပုံတင်အချက်အလက် များကို ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အညီ အလေးအနက်ထား ကိုင်တွယ်၍ ယခုဖြစ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထမ်းရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီဥပဒေနှင့်အညီ အပြုသဘောဆောင်သော ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
Ali Cloud IP database သည် ပထဝီဝင်အနေအထားအရ IPIP. NET ကုမ္ပဏီများကို ထိပါးစေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
ဇူလိုင် ၂၁ ရက်က Ali Cloud နှင့် IPIP. NET တို့ ပူးတွဲကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သညျကွညောခကျြဟာ လီမိုးတိမျတောငျဟာ ဝနျထမျးတှရေဲ့ထုတျကုနျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုအတှကျ အသိအမှတျပွုထားတဲ့ လုပျငနျးသတျမှတျခကျြတဈခုကို ခြိုးဖောကျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ Ali Cloud သည် ချက်ချင်းလက်ငင်း ဆွဲထုတ်သွားခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများ၊ ထုတ်ကုန်များကို IP Location ပေါ်သို့တင်ကာ ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့သည့် အရာများနှင့် ပက်သက်၍ ဝန်ထမ်းများက အလေးအနက်ထား ကိုင်တွယ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါ့အပြင် ဌာနတွင်းထိန်းချုပ်ရေး အစီအစဉ်ယန္တရားတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်သွားဖို့ကိုလည်း အလားတူ တားဆီးခဲ့ပါတယ်။
Topics: မွငျကှငျးစမ်းသပ်ဗားရှင်းထုတ်ပြန်ပြီး နှစ်ရက်အကြာမှာ Ali Cloud ဟာ လူကြိုက်များလာပြီး
Tags Alibaba Cloud | Alibaba∗ | e-commerce platform | user information
Alibaba မှ ဝယ်ယူမည့် ခရမ်းရောင်အလင်းတန်းကုမ္ပဏီ Cloud အ တွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်
ရိုကျတာသတငျးရငျးမွဈကို ကိုးကားပွီး အလီဘာဘာကုမ်ပဏီအုပျစုက ဦးပိုငျလီမီတကျနဲ့ တရုတျအစိုးရပိုငျကုမ်ပဏီတဈခုတို့က ရှယျယာ ဝယျယူဖို့ စဉျးစားနကွေပွီး Cloud Infrastructure Corp of Purple Company Limited ကလညျး ရှယျယာတှကေို အပွိုငျအဆိုငျ ဝယျယူဖို့ စဉျးစားနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ ယင်းရှယ်ယာများ၏ ဈေးနှုန်းသည် ၇၇ သန်းအထိ ရှိနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Industry Jul 13 ဇူလိုငျ 14, 2021
Industry Aug 03 ဩဂုတျ 4, 2021
အလီဘာဘာ အမွဲတမျးအလုပျထုတျခံရမယျလို့ စှပျစှဲခံရတဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာကြူးကြျောမှု အမြိုးသားဝနျထမျးကို
သြဂုတ် ၉ ရက် နံနက်အစောပိုင်းတွင် အလီဘာဘာ၏ အမှုဆောင်ချုပ် ဂျန်ယောင်က ဝန်ထမ်းအမျိုးသားတစ်ဦးကို ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ပြီး ယခုကဲ့သို့ အမှုအခင်းများ ဖြစ်လာပါက နိုင်ငံအနှံ့ စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
Industry Aug 09 ဩဂုတျ 9, 2021
ပဋိ ပက္ခများစွာကြောင့် သုံးစွဲသူများ နှေးကွေးလာကြောင်း မလွဲမသွေ ပြောကြားခြင်း၊ ဗီဒီယိုဖလက် ဖောင်းများပျက်ခြင်း၊ ဈေးကွက်အားမာန်များ ပြသခြင်း
'အမြားကွီးတိုကျဖကျြတယျ၊ ဒီဥက်ကာပြံနဲ့ တူတဲ့ အမွနျနှုနျးမွငျ့တကျလာမှုက ဈေးကှကျကိုစိနျချေါပွီး အီးကောမာ့ဈရဲ့ တနျဖိုးကွီးအသဈတှနေဲ့ ဆှဲငငျအားရဲ့ သကျရောကျမှုကို စတငျခံစားရနိုငျပါ တယျ။
Industry Aug 24 ဩဂုတျ 25, 2021